Wireless kuchaja nhare po ...
Ichi chitsvuku chinopisa. Yayo Heating accessories ndeye graphene machira akagadzirwa nesherfond. Iwo ma graphene machira akavakirwa muchirafu. Iwo mabhatani akabatana neiyo graphene machira. Iwo mabhatani akanamwa ne silica gel. Iko kupisa basa kunogona kuvhurwa nekuvharwa nemabhatani, uye kupisa kwekudziya kunogona kugadziridzwa. Ine homwe diki, isa simba kubhengi mairi, inogona kusimbisa iyo graphene jira. Mumamiriro ekunze anotonhora, inogona kutipa kupisa, chigadzirwa chikuru, chakanyanya pr ...
Iyi ndiyo graphene yekupisa ziso mask. Ichi chigadzirwa chinonyanya kubvisa kuneta kwemaziso uye kukurudzira kutenderera kweropa. Iko kupisa kunoshandisa graphene zvinhu. Kana izvo zvigadzirwa zve graphene zvikaipisa, vanogona kusunungura mafungu emhepo ari kure, ayo anogona kusimudzira ropa revanhu. Kutenderera, bvisa kuneta kwemaziso. Ichi chigadzirwa chinoshandisa graphene yekupisa hetera, ayo ari ekutanga kudziyisa zvishongedzo, zvakagadzirwa nekambani yedu, uye kambani yedu ine graphene nyowani yekutsvagisa zvinhu uye timu yekusimudzira iyo yachinja busi ...
Ichi chigadzirwa chidiki saizi, yakawanda-inoshanda, iine zvigadzirwa zvemagetsi, ine mbozhanhare mbozha uye isina waya kuchaja, tochi uye mamwe mabasa, akakodzera kushambadzira zviitiko zvekushambadzira kana zvipo zveKisimusi Mabasa makuru. Kuchengetedza basa, kusanganisira tambo dzese dzekuchaja mumusika 3. Nharembozha inobata 4. Lighting function Model No.
Ugere muhofisi yakatsvinda, padhesiki rako, pane chinoshamisira chinyoreso chinobata, chinogona kuchengeta yako hofisi zvigadzirwa, kuchaja yako nharembozha, uye inogona kushandiswa sechigadziro chefoni yako. Ichavhenekera zvakare, ichiita kuti iwe ude kuti zvirimo zviratidzwe zvinopenya muhofisi, uye zvichachinja nemavara akasiyana, kuitira kuti shamwari dzakakukomberedza dzimirire kuti uzviteerere, izvo zvinonyanya kufadza, zvinoita kuti basa rako riwedzere kufara , uye nakidzwa nekunakidzwa kwehupenyu uchishanda. Kurumidza uye kurudzira ...
Model Nha. SD003 Kubuditsa 10W / 7.5W / 5W Input 9V / 21.5A / 5V 2A Nhare mbozha inobata hongu Wireless kuchaja nharembozha, maearifoni, mawadhi akangwara, Kudhinda Matekiniki eGrafikisi G Tsamba yekudhinda, UV kudhinda Mashandisiro Ekushandisa Mamiriro Ekusimudzira, uye Kuvaka kwechikwata, Kugamuchirwa Kwezvipo, Kudzokera Kuchikoro / Kupedza Kudzidza, Nyowani Bhizinesi Anopa, Tsika dzeMitambo, "Ndatenda" Zvipo, Zvimwe Zvekuita Zvinhu PU Brand Sheerfond Logo Kudhinda: ...
Iyo parameter yechigadzirwa iri seinotevera: Model No. : 5V2A, isina waya charger: 5V1A 5W Wireless kuchaja Gr10W / 7.5W / 5W Chikumbiro mamiriro P Bhizinesi Zvipo, zvipo zvekuzvarwa, zuva rababa, zuva raamai, zvipo zvekutenda, zvipo zveVIP, zvipo zvekusimudzira, zvipo zvemusangano ...
Chigadzirwa paramende Model Nha. X-2 Kubuditsa 5V 2A Kuisa AC90-240V LED Ruvara Ruchena Kudhinda Matekiniki eGrafiki Gr Letterpress kudhinda, UV kudhinda Mashandisiro Mamiriro ekusimudzira zviitiko, Kudzidziswa uye Kuvaka Timu, Kugamuchira Zvipo, Kudzokera Kuchikoro / Kupedza Kudzidza, Nyowani Bhizinesi Kupa , Tradeshow Kupa, "Ndatenda" Zvipo, Zvimwe Zvekuita Zvinhu ABS, PC Brand Sheerfond Logo Kudhinda: Yakasarudzika Logo Dhizaini, Yakagadzirirwa Kudhinda Dhizaini Ruvara C ...